Home Opinion Dahabshiil Waa Gurmad loogu gargaaray Soomaalida
Laga soo bilaabo burburkii dawladii dhexe ee Somalia waxay galeen Shacabka soomaaliyeed dhamaan daafaha dunida waxaanay ku kala baaheen wadamo iyo qaarado kala durugsan.
Waxaa loo baahday dadkuna ay tabeen sidii loo xidhiidhi lahaa umaduna ay isu xaal ogaan lahayd mid dalka ku hadhay iyo mid qurba joogaba, waxaa xasuus mudan doorka ay ka qaadatay shirkada xawilaadaha lacagaha ee Dahabshiil.
Dahabshiil waxay isku xidhay soomaalidii meel kasta oo ay joogto iyadoo taariikhdeedu ka durugsantahay wakhtigaan soo xusay haddana waxaan u soo qaatay wakhtigan waa Xiligii ugu saamaynta badnaa ee ay la darsaan dadka soomaaliyeed.
Dedaalkay u gashay Shirkada dahabshiil ummada soomaaliyeed waxay ku mutaysatay inay noqoto shirkada ugu weynee afrika laga leeyahay ee ka shaqaysa xawilaaada lacagaha, waxaanay mudantahay xurmo iyo xaqdhawr gaar ah.
maanta oo ay taariikhdu tahay 2015 waxay soomaalidu qalalaase ku soo jirtay mudo dhan rubuc qarni waxay mar walba shirkadu ku garab taagnayd Shacabka soomaaliyeed kaalmayntooda iyo u gargaaridooda meel kasta oo ay joogaan dadka dalka joogaa ha ugu bataane.
Haddaba Siyaasiyiinta iyo Saxaafiyiinta sida xun u Turjuma Shaqada Shirkadu u hayso shacabkeeda iyo dhamaan aduun weynaha kale waxaan kula talin lahaa inay ka waantoobaan Been abuurka iyo fidnada ay ku dulmiyayaan Shirkada Dahabshiil.
Eng. Hussein Aided ayaa todobaadkii hore waxa laga duubay muuqaal uu kaga hadlayo shirkada Dahabshiil isagoo ku hanjabaya inuu ahaa ninkii ka danbeeyay in la xidho shirkadii Al-barakaat iminkana uu u soo Tafa xaydanayo Shirkada Dahabshiil.
Haddaba Maadaama uu ahaa nin Masuula Hussein miyay tahay inuu la caqli noqdo Budhcad Saxaafadeedka ku caanka ah Qabyaalada iyo Xaasidnimada ee Dahir Calasow.
Ha ogaadaan Hussein iyo Dahir inay bilaabeen colaad ay la galayaan dhamaan Shacabka soomaaliyeed hana ogaadeen inay godob ka galayaan dhamaan Shacabka Somaliland taasoo sababaysa in loo maro iska dhicintooda qaabkii soomaaliyi u kala danbayn jirtay waanay ka shalayn doonaan waxa kala kulma.
Soomaalidu waxay ku Maahmaahdaa Abeesadii Farta loo Taagay Fanaxay u booday maanta way dhaaftay Arrinta Dahir Dahabshiil oo waxay maraysaa in la colaadiyo dhamaan Shacabka reer Somaliland iyo ganacsiyadooda taasina waxay u taalaa dhamaan Shacabka Somaliland, siday ka yeelayaana waa siday hore uga yeeleen markii uu Dahir soo fara geliyay ee uu dacaayadaha ka fidiyay shirkadii duulimaad yada ee Daallo Airlines.
Hussein Aided-na waxaan leeyahay horta marada wuu kaala degay Dahir waxaanuu noqday nin kaa caqli badiyay maadaama uu ajandihiisa ku marsaday waxaana is waydiin mudan adigu sidee ayaa hore soomaali kuugu aamintay sidee baadse u ahayd masuul qaran?
Guntii hadalkaygan iyo gabagabadiisu waa waar ha isku qodina god hadimo hadaad qodidna ha dheerayn Xuseenow ku dhici doontaana mooyee.